Jesubi: Ọgbọ Dị Mfe Dị Mfe | Martech Zone
Ọ bụrụ na CRM gị bụ ihe dị mkpa maka ijikwa ọgbọ ịchọrọ gị, ndị otu gị nwere ike iwe iwe oge ha na-etinye na data kama ị na-azụlite ụzọ ma na-arụ ọrụ na njedebe. (Amaara m na m nọ n'oge gara aga!)
Jenny Vance na ndị otu ya na Lead. Jen nwere nkụda mmụọ nke na ha nwere Jesubi Mee n'ihu njedebe nke mere ka usoro a dị mfe.
A bụ ihe a video nnyocha na LeadJen utilizes Jesubi:
N'ime LeadJen, mmejuputa iwu nke Jesubi bụ nnukwu ihe ịga nke ọma:
Na 2006, LeadJen na-agbago 7.2 oge elekere kwa onye ọrụ - mmetụ ịbụ ozi e zigara, ozi olu, ma ọ bụ mkparịta ụka na-arụpụta site na iji teknụzụ ọdịnala dịka Salesforce.com, Netsuite ma ọ bụ Microsoft CRM.
N’April 2007, anyị wepụtara nke izizi nke Jesubi maka ojiji nke LeadJen. N'ime ụbọchị iri atọ mbụ, nrụpụta ọrụ ha si na 30 elekere aka elekere ihe karịrị 17 aka kwa awa - mmụba karịrị 200%.
Uzo a di nma nke oma, n’ezie, na odi ugbua ngwa ahia ha na ere ma na ere. Jesubi amụbawo ma ugbu a dakọtara na Ahịa, Microsoft na Netsuite CRM. Jesubi bụ onye ọzọ Aslọ ọrụ na-ere ahịa atụpụtara ebe a na etiti Indiana.
E degharịrị Jesubi na 2013 ma ugbu a Ahịa LLC. Nwere ike ịmụtakwu banyere nwa amaala ha ngwa akpaaka ahịa na App Exchange.